Maguire oo ka hadlay waxa ay Man United u baahan tahay si ay ugu guuleysato horyaalka Premier League – Gool FM
(Manchester) 19 Jan 2021. Daafaca kooxda Manchester United ee Harry Maguire ayaa ammaanay horumarka baaxada leh oo ay Red Devils ku hoos sameysay tababare Ole Gunnar Solskjær, laakiin wuxuu carabka ku adkeeyay in loo baahan yahay horumarin dheeri ah.
Man United ayaa hoggaamineysa miiska kala sareynta horyaalka Premier League, waxayna guul la’aan tahay 12 kulan, waxayna sidoo kale guuldarro ka fogaatay 16 kulan ay ku soo ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda.
Waxaa xilli ciyaareedkan jiri doona dagaal aad u xoogan oo u dhaxeeya kooxaha ku tartamaya hanashada horyaalka Premier League.
Haddaba kabtanka kooxda Manchester United ee Harry Maguire ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Waad arki kartaa sida aan u horumarnay tan iyo intii aan halkaan joogay, koox ahaan waxaan ku jirnaa heer sare laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo aan hormarin karno, waxaan dooneynaa inaan horumar badan sameyno.”
“Waxaan dooneynay inaan guuleysano kulankii Liverpool, laakiin sidoo kale waxaan ilaashanay xawaareheena iyadoo aan nalaga badinin, gaar ahaan banaanka garoonkeena.”
“Marka la bar-bardhigo wixii dhacay sanadkii hore waxaan sameynay horumar, laakiin wali waxaan u baahanahay inaan horumar fiican ku sameyno marka aan kubadda heysano iyo marka aanan heysan.”